Shivaraj Online | पाथीभरा माताको उ’ग्ररु’प देखिदै ! जे माग्यो त्यही पुरा हुने जनविश्वास - Shivaraj Online पाथीभरा माताको उ’ग्ररु’प देखिदै ! जे माग्यो त्यही पुरा हुने जनविश्वास - Shivaraj Online
पाथीभरा माताको उ’ग्ररु’प देखिदै ! जे माग्यो त्यही पुरा हुने जनविश्वास
You are hereHome > Featured > पाथीभरा माताको उ’ग्ररु’प देखिदै ! जे माग्यो त्यही पुरा हुने जनविश्वास – भिडियो सहित
पाथीभरा माताको उ’ग्ररु’प देखिदै ! जे माग्यो त्यही पुरा हुने जनविश्वास – भिडियो सहित
facebook sharing button Sharetwitter sharing button Tweetemail sharing button Emailgmail sharing buttonwhatsapp sharing buttonmessenger sharing buttonsharethis sharing button
आठवटा अंगसिहत गरिने प्रणाम भएकाले सा०षंग भनिएको हो । तर यो पुरुषका लागि मात्र विधान गरिएको छ । महिलाका लागि यो व-र्जित छ । आधुनिक मानिसलाई त
यो आसन पुरानो रूढि मात्र लाग्न सक्छ तर यसले व्यक्तिले अ’हंकारत्या’गलाई प्रतीक बनाउँछ । अ’हंकारलाई त्यागेर ईश्व’रप्राप्तिको मार्गमा लागेको यसले देखाउँछ ।
यो आसनमा शरीरका प्रमुख भागहरूले जमिन छुने हुनाले यसका अनेकौं फाइदा छन् । धर्तीसँग निकटता हुनु भनेको स्वस्थताको लक्षण हो । महिलालाई चाहिँ यो यसरी प्रणाम गर्न नदिइनुको कारण भनेको ग-र्भ र व-क्षस्थ-लले जमिनलाई स्पर्श गर्न हुँदैन ।
एउटा जीवनलाई नै गर्भले पालेर राख्ने अनि वक्षले त्यो जीवनलाई पालन गर्ने हुनाले यी अंगहरूलाई जमिनमा द’बाउन नहुने मान्यता हो ।अझै पाथिभारा देवी हिन्दू धर्म अनुसार
एउटा श’क्तिशाली दे’वी पनि हुन जसको कृपा हामी सबैको माथि हुन्छ । पाथिभारा माताको श’क्ति हेर्न यो भिडियो हेर्नुहोला । भर्खरै पाथिभारा माताको यस्तो रूप देखेर नदेखे जस्तो गर्नेलाई
ठूलो हा,नी भिडियो हेर्नुहोला । र शेयर गर्नुहोला । मानिस भएर जन्मिएपछि भगवान प्रति विश्वास गर्नै पर्छ यदि कसैले यो सब मान्दैन भने ठूलो गल्ती मानिछ ।